Eray Trump Uu Isticmaalay 250 Mar, Sanadkan 2020 | Xaqiiqonews
Eray Trump Uu Isticmaalay 250 Mar, Sanadkan 2020
Trump ayaa ku tababartay tan iyo markii uu xilka qabtay 2017, tilaamaha isku midka ah ee uu u adeegsado dadka ka soo horjeeds siyaasadiisa, gudaha iyo dibadaba.
XAQIIQO NEWS -WARARKA DIBADDA
Erayada ugu badan ee Trump uu u isticmaalay dadka dhaleeceeya siyaasadiiisa waxaa ka mid ah kalimadda Khiyaano (hoax),ereyagaasi oo la dhihi karo Trump si maalinle ah ayuu u isticmaalaa.
War jeediyaha Tilifishinka CNN, ninka lagu magacaabo Brian Stelter iyo soo saaraha Tv-ga, Peter Pomerantsev ayaa xisaabiyey inta jeer ee Trump uu adeegsaday erayga khiyaano sanadkani gudahiisa.
Brian Stelter iyo Peter Pomerantsev waxa ay ogaadeen in Trump uu adeegsaday 250 mar kalimadda “Khiyaano”. hadii ay ahaan laheyd Xisaabta Koontadiisa Tuwiterka, khudbadahiisa doorasha, wareysiyadiisa iyo shirarkiisa jaraa’id.
Labadan Wariye ayaa sheegay raad xun oo ay reebi karto edeegsiga Trump ee kalimaddan, madaama Trump uu gabaad ka dhigto eraygan markii uusan heyn wax kale oo uu uga jawaabo dhaleeceynta.
Inkastoo wili uusan dhamaan sanadkan 2020, waxaa la saadaalinayaa in ay kor u kici doonto isticmaalka Trump ee eraygan gaar ahaan hadaladiisa uu ka horjeedin doono xisbiga jamhuuriga ee ku saabsan doorashooyinka Nofeembarta soo socota.